Erdogan oo wacad ku maray in Turkigu uu dhinac taaganyahay Qatar - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldErdogan oo wacad ku maray in Turkigu uu dhinac taaganyahay Qatar
June 10, 2017 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Madaxweynaha Turkiga Reccep Tayyip Erdogan. [Xigashada Sawirka: Reuters]
Istanbul-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Turkiga Reccep Tayyip Erdogan ayaa ka codsaday in si buuxda Qatar looga qaado xayiraada uu hoggaaminayo Sucuudigu, isaga oo sheegay in Sucuudi Caraabiya looga baahanyahay in ay sameyso walaalnimo.
Erdogan ayaa sheegay in godoominta Qatar aysan xal u keeni karin dhibaatooyinka gobolka waxaana uu wacad ku maray in uu sameyn doono wax walba oo awoodiisa ah si gacan looga geytso loona soo afjaro xasarada gobolka ka jirta.
“Kama aanu tagayno walaalaheen Qatar,” Erdogan ayaa sidaas u sheegay xubno katirsan xisbigiisa AK kadib munaasabad afur ah oo ka dhacday shalay oo Jimce ahayd gudaha magaalada Istanbul.
“Sidoo kale waxaan codsi gaar ah u dirayaa maamulka Sucuudiga. Waxaad tihiin dowladda ugu balaaran uguna xooga weyn gudaha Khaliijka. Waxaan idiin ku yeernaa Difaacaha Dhulka Barakaysan. Waa in aad ka shaqaysaan walaalnimo, maya colaad.” Ayuu yiri Erdogan.
“Waxaan sheegayaa waa in gebi ahaanba la qaadaa cunaqabataynta.” Ayuu ku daray.
Asbuucii hore, baarlamaanka Turkiga ayaa meel mariyay sharci u ogolaanaya in ciidamadooda la geeyo saldhiga milatari ee uu Turkigu ku leeyahay gudaha Qatar.
July 6, 2017 Erdogan: Saldhiga Turkigu waa u jirayaa ilaa inta Qatar ay rabto